Kan ugu caqliga badan ma aha midka madax adag, laakiin kuwa caqliga badan waa kan adeegsada fikradaha dadka kale oo u beddela si uu u fiicnaado.
Posted By: KongoLisolowaa: May 25, 2019 00: 40 No Comments
Waxaan dhamaanteen nahay booqdeyaasha waqtigan, meeshan. Kaliya waannu ka gudubnaa. Himiladeenna halkan waa inaan fiirsano, baranno, korino, jeclaano,waxa,, guriga ayaan tegaynaa.
Maahmaah: nin asal ah & Eray: By, CMK
U fiirsashada walaalahay: (56 gabdhood waxay u dhinteen sanqadha, joogitaanka xorta ah, iwm.) Hal suuf, maalin dhan sababta oo ah kiimikada loo isticmaalay galmada nadaafadda jirka ee aadka u nuugta, taas oo beddeshay dareeraha gel "Wuxuu keenaa caabuq iyo kansar ku dhaca kaadiheysta iyo ilmo galeenka"
Oct01 11: 56